बालबालिकालाई अत्यावश्यक छ हरियाली वातावरण ! - Web Tv Khabar
बालबालिकालाई अत्यावश्यक छ हरियाली वातावरण !
श्रावण ६, २०७८ बुधवार १३:०७ बजे
काठमाडौं । प्रकृतिसँग घुलमिल हुनु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ, यसले भावनात्मक र व्यवहारसम्बन्धी समस्यालाई टाढै राख्छ । विशेषगरी हरियालीको नजिक भएका बालबालिकाको बौद्धिक विकास राम्रो हुने लन्डन विश्वविद्यालय र इम्पेरियल कलेजले गरेको एक अध्ययन पत्ता लगाएको छ ।
शोधकर्ताका अनुसार महामारीका समयमा प्रकृतिको नजिक हुनु अझ बढी आवश्यक मानिएको छ । लकडाउनका कारण बालबालिकाहरुले धेरै समय घरभित्रै बिताउँदा उनीहरूकाे मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि पनि प्राकृतिक वातावरणको बढी आवश्यकता पर्ने भनिएकाे छ ।
यसमा ९ देखि १५ वर्षसम्मका ३५ सय बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन गरिएको थियो । अध्ययनमा संलग्न प्रोफेसर केट जोन्सका अनुसार बालबालिकालाई तर्कशक्ति, भावनात्मक समस्या, व्यवहार, हाइपर एक्टिभिटी र साथीभाइसँगको व्यवहारका सम्बन्धमा प्रश्न गरिएको थियो । बालबालिका दैनिक प्राकृतिक वातावरणको सम्पर्कमा भए नभएको हेर्न स्याटलाइटको डेटाबाट सहयोग लिइएको थियो ।
प्राकृतिक वातावरणलाई ग्रीन स्पेस (रुखविरुवा भएको हरियाली पार्क, जंगल) र ब्लु स्पेस (नदी, पोखरी र समुद्र) गरी दुई भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गरिएको थियो । यसमा हरियाली क्षेत्रको नजिक हुने बालबालिकामा बौद्धिक विकास धेरै भएको पाइएको छ भने भावना एवं व्यवहारसम्बन्धी समस्याको जोखिम १७ प्रतिशतसम्म घटेको देखियो ।
ब्लु स्पेसमा बस्ने बालबालिकामा यस्तो अवस्था देखिएन । शोधकर्ताका अनुसार किशोरावस्थामा प्रवेश गर्न लागेका बालबालिकाका लागि हरियो प्रकृतिमा घुलमिल हुनु महत्वपूर्ण छ ।
प्रोफेसर केन्ट जोन्सका अनुसार रुखविरुवा र पशुपक्षिंको सम्पर्कमा पुग्ने व्यक्तिलाई मनोवैज्ञानिक समस्या कम हुन्छ । वातावरणमा घुलमिल हुँदा चिन्ता, तनावमा कमी आउँछ र मानसिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।